SOS ao amin'ny Paradisa: tatitra hafa avy any Trinidad sy Tobago
Home » Travel Associations News » SOS ao amin'ny Paradisa: tatitra hafa avy any Trinidad sy Tobago
Ity dia tatitra manaitra ny maso momba ny krizy ankehitriny ao amin'ny firenena Karaiba any Trinidad sy Tobago. Ny praiminisitra teo aloha no nanoratra azy.
eTN dia nanolotra an'ity lahatsoratra ity tamin'ny praiminisitra Trinite & Tobago teo aloha Ramatoa Kamla Persad- Bissessar. Fahadisoana izany. Ny lahatsoratra dia nosoratan'i Kamal Persad izay tsy misy ifandraisany amin'ny praiminisitra teo aloha. eTN miala tsiny noho io lesoka io.
Ny mainty hoditra ao Trinidad sy Tobago dia mamaritra ny toe-draharaha misy ny vondrom-piarahamonina mainty ho "krizy" ary mila fitandremana maika. Ny tena mampanahy dia ny toe-draharaha misy ny heloka bevava misy eo amin'ny vondrom-piarahamonina mainty, ny mainty amin'ny herisetra mainty, ny famonoana ny tovolahy mainty ary ny ady andian-jiolahy.
Notondroin'izy ireo fa mainty ny endriny, ary ireo voafonja latsaky ny 18 taona dia ao amin'ny Ivotoerana Fampiofanana ho an'ny tanora (YTC). Ny firongatry ny tovolahy mainty vao tsy ela akory izay avy ao amin'ny tranon'i Michael St Michael's Boys 'dia tena mampanahy azy ireo ihany koa.
Sehatra iray hafa misy ny ahiahy maneho ny tsy fahombiazan'ny mainty hoditra amin'ny fanabeazana. Manjary olana ara-pihetseham-po isan-taona izany rehefa mivoaka ny valin'ny SEA, CSEC ary CAPE ary nambara ny lisitry ny mpandray anjara ambony sy ny mpandresy vatsim-pianarana. Misy misolo tena ny solontenan'ny mainty hoditra ho scorer ambony amin'ireo fanadinana ireo.
Ny valin'ny fanadinana SEA 2017
Ohatra iray amin'izany ny valin'ny fanadinana SEA 2017 izay nahitana ireo toerana telo voalohany voalohany nahitana mpianatra Indiana avy amin'ny sekoly antokom-pinoana. Ny fahombiazana amin'ny raharaham-barotra sy ny asa dia resahin'ireo mainty hoditra hatrany koa. Nasongadin'izy ireo ny tsy fisian'ny mainty hoditra.
Trinidad dia fiarahamonina maro karazana ary ny mainty hoditra dia mampitaha tsy tapaka ny toe-javatra misy ny krizy amin'ny fahombiazan'ny karana hita - ny karana no anton-diany sy fampitahana.
Ny fironana amin'ity fampitahana miharihary ny foko ity dia ny fanomezan-tsiny ireo karana noho ny krizy ao amin'ny vondrom-piarahamonina mainty. Io lafiny fandinihana mainty ny toe-javatra misy azy ireo io dia mety hiteraka korontana sy fifandonana. Indraindray ny Kongresy Nasionaly Mitambatra (UNC) sy ny mpitarika azy, Ramatoa Kamla Persad Bissesser, dia notsongaina noho ny fanafihana, indrindra satria izy no nitantana ny governemanta nandritra ny dimy taona (2010 - 2015), ary ny toby politika UNC dia nipetraka tao amin'ny vondrom-piarahamonina Hindoa sy India.
Ireo seho resaka mainty, lahatsoratra, taratasy sns.
Ny loharanon'ny hevitra mainty dia aseho amin'ny seho an-tariby amin'ny antso an-tariby amin'ny radio, amin'ny taratasy ho an'ny tonian-dahatsoratra, ary lahatsoratra ao amin'ny haino aman-jery toy ny isan-kerinandro TnT Mirror izay saika gazety Afro-centric isan-kerinandro. Ireto haino aman-jery ireto dia arahin'ny Trinidad Express izay ahazoan'ny besinimaro dokambarotra marobe ny toerana mainty izay mazàna Afro-centric amin'ny fijerin'izy ireo an'izao tontolo izao sy ny toerana misy azy ireo amin'ny olana. Misy tanteraka ny tsy fisian'ny hevitra hafa mifototra amin'ny karana ato amin'ity gazety mpiseho isan'andro ity. Amin'io lafiny io, ny Trinidad Express azo heverina ho toy ny gazety afro-sentric an-tanàn-dehibe ary azo antoka fa tsy "nasionaly" na "mahaleo tena" araka ny filazany azy.
Aiyegoro Ome avy amin'ny National Joint Action Committee (NJAC) sy ny sampana kolontsaina, ny National Action Cultural Committee (NACC), tao amin'ny taratasy iray ho an'ny Express ("Marka Andro Fanavotana isaky ny tokantrano." 24 Jona 2017 p. 15) nanolo-kevitra fa ny Andro Fanafahana dia tokony hankalazaina be. “Aleo atrehana fa ao anaty krizy ny fianakaviana afrikanina. Ny famantarana dia eny rehetra eny. Ireo vondrom-piarahamonina Afrikana voalohany indrindra dia iharan'ny fampijaliana. Ireo tovolahy afrikanina manokana, indrindra indrindra, no tompon'antoka matetika ary iharam-pahavoazana, na eo aza ny zava-bitan'ny tanora afrikanina maro, dia voaloton'ny hadalana be ny satan'ny afrikanina. ”
Mampiasà fiteny fahakiviana sy trauma amin'ny taratasy lava be ho an'ny mpanao gazety (Guardian. Jona, 20, 2017 p 21), mpanoratra mainty iray hafa, Michael Joseph, nanoratra hoe: “Mayday, Mayday, Mayday! SOS, SOS, SOS ho an'ireo mpitarika anay. Aiza ry zareo? Ny vondrom-piarahamonina Afro-centric dia tsy misy mpitondra ary tsy misy feo. "Notohizany:" Ny zava-tsarotra atrehinay: miaina famonoana olona any amin'ireo vondrom-piarahamonina mainty izahay, toerana itodihan'ny rafitra mankany amin'ny fahafatesantsika ary fiaraha-miasa tanteraka asehon'ny fihetsika sy ny fomba fitondran-tena izahay. " Nilaza i Joseph fa ny "rafitra" dia miasa ho an'ny hafa fa tsy ho an'ny mainty hoditra:
Hoy ihany i Michael Joseph: "Ity fiaraha-monina misy foko sy foko maro samy hafa ity dia izao, mitady fatratra ho an'ny tenany ny foko tsirairay ary tsy misy maharatsy izany. Ny tsy mety dia ny tsy fananam-peo ireo vondrom-piarahamonina Afro-centric. Mbola amidy amin'ny mpandoa avo indrindra isika, miankina amin'ny fanabeazana sy ny fampianarana. Ary noho izany, mandray anjara amin'ny fandrosoana sy ny fahombiazan'ny olon-kafa ankoatry ny tenantsika isika. Aiza ireo mpitarika antsika? ”
Niantso ny mainty hoditra i Joseph mba “hifoha mainty hoditra - tsy afaka mamahana ny tenantsika sy miaro ny fianakaviantsika sy ny vondrom-piarahamonintsika isika ary tsy tsara ho an'ny vahoaka izany.” Nanampy izy hoe: “Toa tsy misy dikany amin'ny vondrom-piarahamonina mainty ny tanjaky ny isa. Rahoviana no hijanona ny famonoana? Iza no mahazo tombony amin'izany? ” Nanantena izy fa ny tanora mainty hoditra dia "hitsahatra tsy hifamono, ireo tanora ao anaty fotoana mety hamily ny basy ho an'ny tena ady." Misy vokany eo amin'ny hafa ity olana mainty ity: “Ny ankizy mitombo tezitra tsy misy fitiavana ny ray aman-dreny na ny iray hafa,“ toy izany ny tombony eo amin'ny fiarahamonina “voaroba na novonoin'ireo tanora tsy afa-po ireo.” Mampidi-doza amin'ny fiarahamonina tokoa ny mainty hoditra. Ity dia teboka iray naverin'ireo mpanoratra mainty hoditra hafa momba ny toe-javatra mainty - ny vidim-pirenena tsy maintsy aloan'ny firenena noho ny toe-piainana mainty sy ny krizy.
Ny fanafihan-jiolahy nataon'ireo jiolahy tao amin'ny Fr Clyde Harvey tamin'ny alatsinainy 13th Jona, 2017 ao amin'ny valan'aretina katolika romana ao amin'ny Hermitage Road, Gonsales, any Belmont, Port-of-Spain, dia hitan'ny manam-pahaizana mainty ho tandindon'ny krizy mainty. Ny fihetsiky ny praiminisitra dia navoaka voalohany tamin'ny fanamelohana ny fanafihana nataon'i Fr Clyde Harvey: "Ny fanafihana an'i Mompera Clyde Harvey nataon'ny lehilahy salama saina sy feno basy dia maneho ny ratsy indrindra ao amin'ny vondrom-piarahamoninay. Na eo aza ny zava-tsarotra atrehin'iza amin'ny fiainana dia misy fetrany izay tsy tokony hilentahan'ny olombelona. " Raha nifampiresaka tamin'ny fianakavian'ireo olon-dratsy izy, dia nilaza izy hoe: "Ireo tsy mendrika dia manana ray aman-dreny ary manantena aho fa any amin'ny toerana iray eto amin'ity firenena ity ankehitriny, dia misy ray aman-dreny vitsivitsy mihantona eo amin'ny lohany rehefa misaintsaina samirery momba izay mety ho izy ireo nanao izay hisakanana ny olom-pirenentsika tsy hitondra tena toy izao. ”
“Krizy mainty ity. Aza asiana lokomena. ”
Dr Keith Rowley dia tsy namantatra ny foko niavian'ireo olon-dratsy ireo na naneho ny fomba nifandraisany tamin'ny foko tamin'ny heloka bevava. Fantatra ny mombamomba ireo jiolahy rehefa nosamborin'ny polisy ny tovolahy efatra teo anelanelan'ny 17 sy 24 taona, izay avy amin'ny faritra Gonsales any Belmont any Port-of-Spain. Ny valiny maro hafa momba ity heloka bevava malaza manohitra pretra malaza ity dia mazàna no manameloka an'io asa io. Tsy ny an'ny hafa izany.
Dr Theodore Lewis dia profesora emeritus ao amin'ny Oniversiten'i Minnesota any Etazonia, misotro ronono ary monina any Trinidad. Notateriny ny resaka nifanaovany tamin'i Fr Harvey talohan'ilay heloka bevava tao amin'ny lahatsoratra iray tao amin'ny Express, momba ny asan-dahalo any amin'ny faritr'i Laventille, sy ny momba ny "mpiangona ao aminy izay mizaka ny asan-jiolahy." Nanoratra i Lewis: "Fa izy kosa (Fr Harvey) dia nandeha lavitra ary eny, zazalahy mainty izay lazainy fa tsy mahita lalan-kivoahana. Tsy matahotra ny milaza ny olana i Fr Harvey. Tsy mametraka rano ao am-bavany izy. Krizy mainty ity. Aza asiana lokomena. ”
"Izy (Fr Harey) dia manondro ny refin'ny heloka bevava amin'ny heloka bevava, ny heloka bevava amin'ny akanjo sy ny fehin-kibo, miafina ao ambadiky ny akanjo fanajana." Raha ny marina, ho valin'ny fanafihana ny olony sy ny fiangonany dia nilaza i Fr Harvey fa "amin'ny lafiny iray, tsy afaka manome tsiny azy ireo aho. Ny sasany dia nanondro ireo lehilahy ireo ho tovolahy ratsy fanahy roa. Tsy ratsy toetra izy ireo fa iharan'ny fiarahamonintsika. Tsy resaka famelan-keloka izany. Tsy mahita azy ireo ho meloka aho na mahita azy ireo ho diso lalana - iharan'izany izy ireo. ”
Vola mainty mangalatra olona.
Rehefa noterena hanokatra ny trano vaovaon'ny fiangonana miaraka amina basy i Fr Harvey, dia nitantara ny zava-nitranga iray izy, rehefa nahita ny fanamarinana izy ireo, dia hoy ny iray tamin'izy ireo: "Ireo karama rehetra ireo, tsy maintsy manam-bola ianareo, ry pasitera allyuh manam-bola, allyuh mangalatra vola amin'ny mainty hoditra. "
Ny fanehoan-kevitr'i Fr Harvey momba izany dia tsy nampiavaka ireo mpangalatra ny "pasitera" sy ny "pretra". Tsy noraharahiany tanteraka, ary tsy nisy hevitra tokony holazaina momba azy, ny psikolojikan'ny sain'ny mpanao heloka bevava, ireo tovolahy mainty hoditra, izay mihevitra azy sy ny fiangonany ho “mangalatra volan'ny mainty hoditra” ary mahatsapa fa ara-dalàna amin'ny fandrobana sy fanafihana azy, ary avy amin'inona Ny iray tamin'izy ireo dia nilaza tamin'ny polisy, ireo niharam-boina hafa koa, natosiky ny fahatsapana ho lasa mainty hoditra.
Jiolahy fehiloha fotsy tompon'antoka tamin'ny asa ratsy
Nanameloka ny “fiarahamonina” sy ny “mpanao heloka bevava fotsy miakanjo sy fehin-kibo” i Fr Harvey fa tompon'andraikitra tamin'ny fihetsik'ireo olon-dratsy mainty hoditra, ary ireo meloka mainty kosa dia manome tsiny azy sy ny fiangonany ho “mangalatra volom-bahoaka,” tena tsy fitovizan'ny toerana.
Theodore Lewis naneho hevitra momba ny heloka bevava natao tamin'i Fr Harvey: "Ny zazalahy mainty ao ambadiky ny tetezana dia tsy manana fitaovana hanaovana izany [heloka bevava fotsy fotsy] Tsy ekena izy ireo amin'ny sekoly mihaja, ambaratonga voalohany sy ambaratonga faharoa. Jamba ny oniversite amin'ny tsy fisian'ny mainty hoditra amin'ny fitsaboana sy ny injeniera na eo aza ny tenin'i Noel Kallicharan. Fr Harvey dia iharan'ny 'herin'ny fiaraha-monina izay milalao.' ”
Hoy koa i Lewis: “I Fr Harvey no olona iray eto amin'ity firenena ity izay afaka miara-mipetraka amin'ny jiolahim-boto ary mifampiresaka amin'izy ireo mba hampitsaharana ny adin'izy ireo, ary tanora lahy mainty no tena maty. Miady ny ainy isan'andro ny lehilahy, raha mankeny amin'ny oniversite ny zanakalahin'Andriamatoa, ary raha miady amin'ny tanim-panjakana ho an'ny mpiasa siramamy ireo mpanao politika, dia maty tsy ho ela ny lehilahy mainty hoditra, nandao ny zanany tsara tarehy nefa tsy nisy dadany namaky azy ireo tamin'ny alina, zaza mainty teraka tany amin'ny firenena izay tsy milaza amin'izy ireo ny fahaizan'i Courtney Bartholomew… “
Tsy misy fotoana napetrak'i Lewis eo am-baravaran'ny mpitarika mainty. Ny tsy fisian'ny lehilahy mainty hoditra eny amin'ny oniversite amin'ny fitsaboana sy ny injeniera, toa ny karama karana izay mpianatr'ireo taranja ireo. Ny "mpiasa siramamy" dia karana indrindra, ny sekoly manan-kaja dia misy zaza karana. Amin'ny fahombiazany any am-pianarana sy amin'ny oniversite, indrindra amin'ny fitsaboana, ny lalàna ary ny injeniera, voarohirohy ho tompon'antoka tamin'ny aretina mainty tany Trinidad sy Tobago ny karana.
Manome tsiny ny governemanta PPP (2010 - 2015)
Errol Pilgrim dia nanaraka ny sain'ny fihevitr'i Theodore-Lewis tao amin'ny lahatsorany, “The Africa Condition in Tatters amin'ny T&T " (TnT Mirror. 16 Jona 2017 p. 11). Nolazainy fa lehilahy mainty hoditra ireo mpanao heloka bevava nanafika an'i Fr Harvey ary nametraka ny krizy afrikanina, tsy tao anatin'ny fiarahamonina afrikanina, fa tao amin'ny Governemantan'ny fiaraha-miasa ho an'ny olona (2010 - 2015), ary indrindra indrindra, teo an-tongotr'Andriamatoa Kamla Persad- Bissesser.
Ireo olon-dratsy nanafika an'i Fr Harvey dia nofaritana ho toy ny "mpanota mainty hoditra mainty." Pilgrim dia nanoratra fa "rehefa miroso amin'ny fankalazana ny fahalalahana faha-telopolo taona isika dia sarotra ny mamantatra na inona na inona amin'ny toe-javatra misy ny Afrikanina ao amin'ny fiarahamonintsika izay mendrika fankalazana. Nandritra ny fotoana lava loatra, ny toetran'ny tovolahy afrikanina, misy eo amin'ny sisin'ny fiarahamonina, dia nofaritana tamin'ny habibiana sy habibiana tsy ankijanona ary fandavana izay zavatra mendrika sy ara-dalàna. ”
Errol Pilgrim dia nanondro ny Selwyn Ryan Report ary niroso tamin'ny fametrahana ny toe-javatra misy ny krizy afrikanina miaraka amin'i Kamla Persad Bissesser sy ny governemanta PP. Nambarany fa ny fanafoanana ireo sambo amoron-tsiraka ataon'ny governemanta PP dia tompon'andraikitra amin'ny asan-jiolahy amin'ny mainty hoditra. Mavesatra be ny fitenin'ny Pilgrim: “Ny zava-mahadomelina sy ireo mpanondrana basy dia nankafy fitondrana tsy niato nandritra ny fotoana ela, nahatonga ny mpanompo sampiny, izay misy tovolahy Mainty, hanjakazakan'ny fampihorohoroana eny an-dalambe ary hametraka ireo paos tsy manan-kialofana fonenan'i Afrika manamorona ny lalantsara Atsinanana Andrefana safotry ny ra afrikanina. ”
Pilgraim dia nanoratra fa ny tetika fanompoana nasionaly natolotra dia ny "tetika CEPEP mandroso" ary ny fampiasana fanatanjahan-tena natolotry ny governemanta PP dia navoakan'ny governemanta PP "fanapaha-kevitra mifototra amin'ny foko hitady fako sy hanimba ilay tsangambato izay natomboky ny governemanta teo aloha mahitsy. " Nanampy izy fa ny programa Life Life an'ny PP dia “nanjary orinasa mpanao heloka bevava marobe.” Ity dia fampielezan-kevitra politika izay tsy mahomby amin'ny famahana ny tena antony mahatonga ny krizy mainty, fa manome tsiny ny hafa ny toe-javatra mainty.
Errol Pilgrim dia naka teny tao amin'ny Ryan Report izay nametraka ny fanontaniana: "Inona no lazain'ny fitomboan'ny heloka bevava ataon'ny tanora momba ny tsy fahombiazan'ny taranaka roa teo aloha manome maodely sy fanohanana andrim-panjakana hitarihana ny taranaka ankehitriny?" Ny valin'ny Pilgrim dia voafetra ho dimy taona, 2010 ka hatramin'ny 2017, fony i Kamla Persad-Bissessar praiminisitra. Nomeny tsiny izy noho ny zavatra ratsy rehetra eo amin'ny fiarahamonina mainty. Ny lahatsoratr'io herinandro io, "Hard To Be Black and Proud In T&T," dia nitondra ny sarin'i Kamla Persad-Bissessar miaraka amin'ny soratra hoe: "Raha nitady ny zavatra rehetra ho an'ny olona rehetra ny PNM, dia nikaroha am-pahibemaso ny UNC mba hampiroboroboana amin'ny resaka politika, ny tombontsoany ary ny fampandrosoana ny fotodrafitrasa indianina atsinanana… “
Ny lahatsoratr'i Errol Pilgrim dia kaonty fampitahana ny tsy fahombiazan'ny Afrikana sy ny fahombiazan'ny karana miaraka amin'ny fiheverana fa tompon'andraikitra amin'ny toe-javatra afrikanina ny karana. Ny lahatsoratr'i Pilgrim farany tamin'ny volana Jona, 2017, “Hanohy hanoratra mandra-pahatongan'ny fitsarana mainty aho,” (TnT Mirror, 30 Jona 2017 p. 11) dia nanambara ny tanjony tamin'ny fanoratana: “… ny loza ara-poko sy ara-poko izay tsy maintsy niaretan'ny Lehilahy Mainty tany Trinidad sy Tobago ho tombontsoan'ny vondrona foko sy foko hafa. Manolo-kevitra ny hanohy hifantoka amin'ity fady foko sy foko ity aho. ”
Tsy tompon'andraikitra amin'ny toe-javatra misy azy ireo ny mainty hoditra ary tsy mandray andraikitra amin'ny krizy izay ambaran'izy ireo fa mahazo azy ireo. Ny fitantanana mitohy an'i Eric Williams nanomboka tamin'ny 1956 ka hatramin'ny fahafatesany tamin'ny 1981, ary ny PNM nitantana nandritra ny 30 taona nitohy dia tsy voalaza mihitsy. Ny resaka momba ny fitohizan'ny PNM amin'ny governemanta tarihin'i Patrick Manning dia sorohina, ary ankehitriny eo ambany fitarihan'i Dr Keith Rowley.
Ireo karana vaovao dia ireo karana
Hanaiky ve isika fa ireo fitantanan-draharaha PNM ireo dia tsy nampiroborobo ny tombontsoan'ny mpanohana mainty PNM? Mangina ny momba an'io lohahevitra io. Ny fanomezana tantara ara-tantara ny toe-piainana mainty dia hiteraka fahakiviana - tsara kokoa ny misoroka tanteraka an'i Eric Williams.
Raymond Ramcharitar, mpanoratra amin'ny Trinidad Guardian, marina tokoa rehefa nanoratra izy fa “ny mpampahory amin'izao fotoana izao ao an-tsain'ny Trinidadianina maro dia tsy ny tontolo fotsy, fa ny Indiana eo an-toerana. Tantara iray miverimberina ao amin'ny radio talk, ao amin'ny tsanganana amin'ny gazety, ao amin'ny akademia. Tamin'ny herinandro lasa Express Nanomboka nikapoka ny amponga indray i Selwyn Cudjoe ary nilaza fa nentina teto ny Indiana mba hanakanana ny fandrosoana ara-toekaren'ireo Afrikanina ”(" The View From AL Jaeera. " Guardian. 24 Mey 2017 p. 20)
Ramcharitar dia miresaka ny lahatsoratr'i Cudjoe ao amin'ny ny Sunay Express ("Nahazo rariny izany." 26 martsa 2017 p. 14) izay nanoratan'i Cudjoe fa "ny karana dia nentina tany Trinité mba hanakorontanana ny fandrosoana nataon'ny Afrikanina teo amin'ny lafiny toekarena" ary "ny asa karana nahavita namerina ny afrikanina toerana misy azy ireo. ” Nanatsoaka hevitra i Cudjoe fa "rehefa miresaka manaraka i Kamla dia manantena aho fa hiresaka momba ny fiantraikan'ny tsy fetezana ho an'ireo rahalahiny afrikanina izy ary amin'ny fomba ahoana, amin'ny 2017, no ahafahantsika manitsy ny toe-pahasalaman'ireo mahantra afrikanina izay mbola mijanona eo ambanin'ny faran'ny toekarena." Izany dia toy ny hoe karana sy fotsy hoditra dia mila fanonerana ny afrikanina.
Tsy misy feo Indiana ao amin'ny Express ary Mirror
Ny fanamelohana mainty an'ny karana noho ny toe-javatra misy ny krizy dia omena fanamarinana ara-tantara ankehitriny, ary noho izany, ny karana dia tsy maintsy mandoa ny fanamboarana mainty, hevitra mifototra amin'ny famoronana sy ny famadihana tantara. Raha ny karana no voatonona amin'ity adihevitra momba ny krizy mainty ity dia ny fomba fijery maintin'ny karana no avoaka. Saika tsy misy feo Indiana (mpanao kolontsaina) navoaka tao amin'ny Express ary ny TnT Mirror, litera vitsy dia vitsy hamaly ireo olana natsangan'ny mainty hoditra. Tsy misy resaka momba ny toe-pahasalamana Indiana any Trinidad sy Tobago, na fandinihana ireo olana amin'ny fomba fijery Indiana.
Ao anatin'ny Newsday lahatsoratra (“Position Indo-Trinidadians Today.” 12 Jona 2017 p 12), Trevor Sudama dia nanoratra fa “tsy dia mahalala zavatra betsaka momba ny fisian'ny Indo-Trinidadians eo amin'ny fiarahamonina isika ankehitriny satria tsy misy fikarohana firy sy fampahalalana be loatra nataony. Ny miady hevitra amin'ny programa toa izany dia ny mety hampangaina ho voarohirohy ho mpanavakavaka firazanana sy manao kabary hazakazaka. Ao amin'ny fiarahamonina mahalala fomba, heverina ho fady ny miresaka malalaka momba ny firazanana. ” Saingy ny mainty hoditra dia mirotsaka amin'ny fifanakalozan-kevitra amin'ny hazakazaka momba ny tenany sy ny karana isan'andro, ary ny haino aman-jery manome fotoana sy toerana goavambe hampiala voly an'ity dinika ity.
Manantena ny iray fa ity fifanakalozan-kevitra momba ny krizy mainty ity, izay nofaritan'ny mainty hoditra ihany, dia hitohy amin-kery lehibe, ary hitohy hatrany ny fanaovana tsinontsinona ny fisian'ny Indiana. Rehefa voatonona mihitsy ny karana dia ny mainty no manao fampitahana ny toe-karana araka ny fahitany azy, na manome tsiny ny karana amin'ny krizy mainty
Tsy afaka mitohy izany toe-javatra izany ary ny karana dia tsy maintsy mitady fomba hamaliana ny fanafihana mainty amin'ny karana, ary hanome araka izay tratra ny fanombanana ny zava-misy any Trinidad sy Tobago
Kaongresy manerantany momba ny trozona Humpback